Floorlọ ihe owuwu ụlọ PVC,） 1）-News-Topflor China amachi
Echiche:59 Onye edemede: Onye ndezi saịtị Bipụta Oge: 2020-09-27 Mmalite: Saịtị
1. Nnwale ala Jiri mita okpomọkụ na iru mmiri nwalee okpomọkụ na iru mmiri. Ọnọdụ ime ụlọ na ọnọdụ dị elu kwesịrị ịbụ 15 ℃, na ihe owuwu ahụ ekwesịghị ịdị n'okpuru 5 ℃ na karịa 30 ℃. Kwesịrị ekwesị maka owuwu, iru mmiri ahụ kwesịrị ịdị n'etiti 20% -75%. Jiri ihe nyocha nke mmiri iji chọpụta mmiri mmiri nke akwa ahụ, ihe omimi nke mmiri kwesịrị ịbụ ihe na-erughị 3%. Ike nke ihe mgbakwasị ụkwụ ekwesịghị ịdị ala karịa ihe achọrọ nke ike C-20, ma ọ bụghị nke ahụ ka ekwesịrị iji nhazi onwe onye mee ka ike dị ike. Nsonaazụ nke ule na onye na-agba mbọ ike kwesịrị ịbụ na ịdị ike nke elu nke ala ahụ abụghị ihe na-erughị 1.2 MPa. Maka owuwu nke PVC ala, ihe na-adịghị mma nke ihe mgbakwasị ụkwụ kwesịrị ịbụ ihe na-erughị 2mm n'ime oke nke onye na-achị 2-mita, ma ọ bụghị ya, a ga-eji nhazi onwe onye kwesịrị ekwesị maka ọkwa.
2. Ndokwa nke ala: Jiri igwe na-ekiri ihe karịrị 1,000 watts na padị pịịl kwesịrị ekwesị iji kpochapụ ala n'ozuzu ya, wepụ agba, gluu na ihe ndị ọzọ fọdụrụnụ, nke a zụlitere na nke rụrụ arụ, na ogige ndị nwere oghere. Wepu Jiri ulo oru ihe nhicha nke ihe na-erughị 2000 watts iji kpochapụ ma kpochapụ ala. Maka mgbape na ala, igwe anaghị agba nchara na-eme ka ọgịrịga na polyurethane na-egbochi mmiri na-egbochi mmiri nwere ike kpuchie ya na quartz ájá maka ịrụzi.
3. Self-leveling ewu-base oyi akwa na absorbent isi dị ka ihe na ciment ngwa agha leveling oyi akwa kwesịrị mbụ iji multi-nzube interface ọgwụgwọ gị n'ụlọnga itughari mmiri na a ruru nke 1: 1, wee mechie isi. Maka ndị na-adịghị enweta ume dị ka taịl, terrazzo, marble, wdg, a na-atụ aro ka ị jiri nnukwu ụlọ ọrụ na-agwọ ọrịa maka primer. Ọ bụrụ na mmiri mmiri nke ihe mgbakwasị ụkwụ dị oke elu (> 3%) ma wuo ụlọ a chọrọ ozugbo, enwere ike iji ọgwụgwọ epoxy mee ihe, mana okwu bụ na ọdịnaya mmiri nke ihe mgbakwasị ụkwụ ekwesịghị ịgafe 8%. A ga-etinye onye na-ahụ maka ọgwụgwọ interface n'ụzọ zuru ezu na enweghị mmetuta doro anya. Mgbe elu nke interface interface gị n'ụlọnga na-Fikiere-ikuku, nzọụkwụ ọzọ nke onwe-leveling ewu nwere ike rụrụ.
Anọ, onwe-leveling ewu-agwakọta
Tinye otu ngwugwu nke ịbanye onwe gị n’ime bọket na-agwakọta jupụtara na mmiri dị ọcha dịka ọkwa mmiri-akọwapụtara, ma gwakọta ka ị na-awụpụ. Iji hụ na ịme onwe-larịị na ịgwakọta, a ga-eji ike dị elu, obere ọsọ ọsọ eletrik na igwekota pụrụ iche maka ịgwakọta. Bido na slurry edo na-enweghị akpụ, hapụ ya ka o guzosie ike ma tozuo ihe dịka nkeji 3, wee ghee obere oge ọzọ. Ọnụ ego a gbakwunyere kwesịrị ịbụ nke kwekọrọ na nchịkọta mmiri-ciment (biko rụtụ aka na akwụkwọ nhazi onwe onye kwekọrọ). Obere mmiri ga-emetụta fluidity, oke oke mmiri ga-ebelata ike mgbe ị gwọchara ya.
Ikwuputa ihe nguzo onwe onye
Wunye slurry agwakọta agwakọta onwe ya na ala ụlọ, ọ ga-asọpụta n'onwe ya ma dozie ala. Ọ bụrụ na ọkpụrụkpụ bụ ≤ mm, ọ kwesịrị ka a kpụchaa ya na ezé pụrụ iche. Mgbe nke a gasị, ndị na-ewu ụlọ ahụ kwesịrị itinye spikes pụrụ iche, banye n’ala a na-ewu ya, ma jiri nwayọ tụgharịa n’elu elu onwe ha site na iji pịịl ikuku ikuku pụrụ iche iji hapụ ikuku agwakọtara na agwakọta iji zere afụ pockmarked surface and interface height ihe dị iche. Biko mechie saịtị ahụ ozugbo arụchara ya. A machibidoro ije ije n'ime awa 5, ma zere ihe dị arọ n'ime elekere 10. Enwere ike ịtọ ala PVC mgbe awa 24 gachara. Maka owuwu oge oyi, a ga-atọgbọ ala ahụ awa 48 mgbe arụchara onwe ya. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa egweri na polishing nke onwe-larịị a chọrọ, ọ ga-rụrụ 12 awa mgbe onwe-leveling ewu.
Esi zụta pvc plastic n'ala n'ụzọ ziri ezi